Gökmen Tanis ကျင်းပသံသယဖြစ်ဖွယ်ကျူးလွန်သူ, ဖြစ်ကောင်းမိသားစုဒရာမာ: မာတင် Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 18 2019 အပေါ်	• 36 မှတ်ချက်
ဒါကြောင့်သင်က, ရှိသမျှအရင်းအမြစ်များရှိသည်မြို့တစ်လျှောက်လုံးဆွဲထားကင်မရာများရှိသည်, မည်သူမဆို automated features တွေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကြီးကြီး data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်များကိုနားမထောငျနိုငျသညျ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးမဟုတ်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသပိတ်များကိုပေါ်မှာရပ်တန့်ဖို့ဖွစျနိုငျသလဲ ထို့နောက်အကြမ်းဖက်အရေးယူမှုမှမီဒီယာ၌ဤမြေတပြင်လုံးပုံပြင်မှုတ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်က relational spheres ကိုစကြေညာချက်ကိုဖွင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှသောမက်ဆေ့ခ်ျများထိုး။ အဆိုပါ NIS အစီရင်ခံစာ [စြေးထား] တစ်နေ့တာအတွင်းမှာလည်းသူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခဲ့နှင့်တစ်မိသားစုပြဿနာရှိခဲ့ဟုမူကားယောက်ျား၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ချက်များ, ပါပြီ။ တချို့ကသံသယကသူ၏ရည်းစားဟောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါ, အခြားသူများကသူ၏ပစ်မှတ်ကသူ့ဆွေမျိုးများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အားလုံးအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များစမ်းသပ်ဖို့နှင့်လူမျိုး၏တုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာဖို့ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထား PSYOP နှင့်အတူရိုးရှင်းစွာဤနေရာတွင်ခဲ့ပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လမ်းမများပေါ်တွင်ရဲတပ်သငျသညျတခုတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းပြည်ယူနိုင်ကြောင်းကိုမြင်လျှင်ရှိသည်! ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကသစ်ကိုတစ်ခုခု, လူမှုရေးမီဒီယာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများအမည်ရလျှို့ဝှက်နိဒါန်းမိတ်ဆက်anice လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကရဲပုံရိပ်တွေကိုသာသာကသူတို့ရဲ့ website သို့တဆင့်လူမှုရေး, မီဒီယာအပေါ်အပ်လုဒ်လုပ်ထားနိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ်လွှတ်အားလုံး, နယူးဇီလန်အတွက်တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းရာအရပျကိုယူ ဤဆောင်းပါးတွင်။ သင် (ကြီးတွေဒေတာစနစ်များများအတွက် ikbenveilig.nl ကောင်းသော) လုံခြုံဖြစ်ကြောင်းပြောနိုင်ရှိရာတစ်ဦးက website ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအတောအတွင်းကြင်အမျိုးမျိုးသောကြောက်မက်ဘွယ်သောအခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်ဆင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ လူများတို့သည် "ဝိုင်းထားခြင်း၏ပြည်နယ်" ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာမှတဖြည်းဖြည်းအသုံးပြုသောရနိုင်ပြီးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပြုမူနိုင်ငံသားတွေတိုင်းတာရန် အထဲမှာနေဖို့ ကုဒ်5အတူ။
ရဲသတင်းများအရစွပ်စွဲခံရသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုစောင့်ကြည့်။ ဒါကလည်းငါတို့ပြီးသားဖို့အသုံးပြုရနိုင်သည်ထက်အသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်ဆေး၏နိဒါန်းဖြစ်ပါသည်။ လူများတို့သည်အကြီးအကျယ်လက်နက်ကိုင်မျက်နှာဖုံးအရာရှိများ၏လှပသောပုံရိပ်များပျော်မွေ့ဒါသိသိသာသာစမ်းသပ်ပြီးအားလုံးရဲပြည်နယ်အတိုင်းအတာ 1 နေ့ကများမှာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလမ်းများပေါ်တွင်တင့်ကားများ၏နိဒါန်းမြျှောလငျ့နိုငျသောအခါအ? ah, ဒီအဘို့ကျနော်တို့ကိုပိုပြီး (အတု) ကြောက်မက်ဘွယ်သောအပိုနဲ့လေးလံလက်နက်များလိုအပ်!
ဤဇတ်လမ်းယူဆရမကြာမီတစ်မိသားစုဒရာမာ gedownplayed ပါလိမ့်မယ်။ ဤအတောအတွင်း 1 နေ့ရက်ကာလ၌သိသိသာသာအားလုံးစနစ်များကိုစမျးသပျအဲဒီမှာရိုးရိုးအမြင့်ဆုံးတပ်ဖြန့်သောဆင်ခြေတွေနဲ့ဝေးမင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်းရ။ တစ်ဦး "အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူက" တဦးတည်းအခြားထုတ်ပယ်နှင့်ဂျီဟတ်ဝါဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောအအကြောင်းကိုကြောင့် relational spheres ကိုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့မဟုတ်ပြဿနာများဖြစ်နိုင်ခြေကိုသွားနိုင်ကြောင်းပါဘူးဟုစွန့်ခွာရန်ဆီအကူအညီတောင်းသကဲ့သို့သင်တို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောလူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးသူမ၏အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ အဆိုပါ NOS သတင်း လုပ်နေသင့်ပါတယ်သိသာလယ်ပြင်၌ရှိသောသူမ၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လျှင်လူတိုင်းတစ် pee ပြု. တပြင်လုံးကိုအရာနောက်ထပ်ကောင်းသောပတ်ချာလည်နေသည်။
Geenstijl ကြောင်းGökmen Tanis ဖြစ်ကောင်းလည်ချောင်းနာအဘိဓါန် Moroccan ကနေဖော်ပြခွင့်ရခဲ့သည် ဒီရုပ်ရှင် ကချောမွေ့စေဖို့ပဲ။ အဘယ်သူသည်သိတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပြုမူမခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြသည်? မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျသူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ထားအစိုးရကထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာမထင်မမှတ်သင့်တယ်။ ဒါဟာမဖွစျနိုငျ; ဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ပါပဲ။ ဒါကပူးပေါင်းကြံစည်မှုစဉ်းစားနဲ့တစ်ဖန်ပြန်လည်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြရသည်။
သေဆုံးမှုနှင့်ဒဏ်ရာအမြဲမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးပြီးနောက်, ငါတို့အစစ်အမှန်ပုံနဲ့အစစ်အမှန်မျက်မြင်သက်သေများနှင့်စစ်မှန်သောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့အစိုးရများနှင့်အာဏာပိုင်များပျော်စရာအဘို့တစ်ခုခုလုပ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်လော အဘယ်သူမျှမ, သူတို့ကပျော်စရာအဘို့ကိုမကျင့်, သူတို့ရဲပြည်နယ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်လက်လုပ်ပါ။ သင်သိ? "yeah, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲသေဆုံးမှုနှင့်ဒဏ်ရာကိုအတုမရကြလိမ့်မည်နည်း"သင်အရှင်သူတို့ရဲ့ပုန်ကန်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးအာဏာရှင်ရဲကိုပြည်နယ်အောက်မှာ 17 လူဦးရေသန်းဆောင်ကြဉ်းနိုင်လျှင်? အဘယ်ကြောင့်မခံသနည်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းရုပ်ပုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောက်ကဗီဒီယိုမှာနှငျ့သငျသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာကိုသတိရ, နက်ရှိုင်းသောအတု en greenscreen နည်းစနစ်။ မုသာ၏အမီဒီယာအာရုံစိုက်မှုနှင့်အထပ်ထပ်တစ်ခု overkill အတူကပေါင်းစပ်, ထို့နောက်လူတိုင်း (မူပိုင်ယောသပ်သည် Goebbels) ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။
ကလူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်နေတစ်လျှောက်လုံးမီဒီယာများ၏ကင်မရာများတော်တော်များများနီးကပ်စွာနောက်ကိုလိုက်နိုင်ပုံကိုကြည့်ဖို့ထူးခြားသောမဟုတ်လော သူတို့လိုအပ်နေပါသည်အတိအကျဘယ်မှာသူတို့သိထားကြပါလျှင်ကြောင့်သလိုပဲ။ ကောင်းစွာ, အိုး။ တင်းကျပ်စွာအိပ်။ မျက်စိကိုပိတ်နှင့် peckers ။ ခမညျးတျောဝတ်စုံသင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင်အောက်ကမှတ်ချက်တွေကိုသတိရပါနှင့် ယခင်ဆောင်းပါး ဖတ်ပါ။ အမည်ရအသံတွေကိုကြားသိကြသည်! ဖတ် ဒီနေရာမှာအဘယ်ကြောင့်ဖွင့်!
source link ကို entries တွေကို: nos.nl, telegraaf.nl
Tags:: 24 oktoberplein, အဖမ်းခံရ, ဖမ်းဆီး, arrestatie, မိသားစုဒရာမာဇာတ်ကား, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အဖမ်းခံရ, Gökmen Tanis, ဂျီဟတ်ဝါဒီ, ဂျီဟတ်ဝါဒီ, Utrecht
18 မှမတ်လ 2019 21: 00
ထိုအ 66 မိနစ်ငြိမ်း ov ......
18 မှမတ်လ 2019 21: 27
ဒံယလေသ Miller ကအဆိုပါ NOS များကဆန္ဒပြသက်သေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာမှုရှေ့ဆက်ထား:
18 မှမတ်လ 2019 21: 35
Utrecht တက္ကသိုလ်၌သာလာ, ဒီ psyop အတွက်အလွန်လေးနက်သောအခန်းကဏ္ဍဟာ kijkbuiskindertjes..Pauw နှင့် Jenek ဘို့ပရိုဂရမ်းမင်းအတွက် De Graaf vnv ၏လှညျ့စားခွငျးအကြောင်းကိုစပ်စုမိပါတယ်
18 မှမတ်လ 2019 21: 43
Beatrice က de Graaf GDR ရေးရာအတွက်အထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမ GDR အတွက် Inoffizieller Mitarbeiter စနစ်ကအများကြီးသိတယ်။ Madam, ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီသကျသခေံဒံယလေသ Miller က!
2004 ခုနှစ်တွင်သူမ Utrecht တက္ကသိုလ် DDR အပေါ်တစ်ဦးပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းရေးသားခဲ့သည်
18 မှမတ်လ 2019 21: 50
မဟုတ်ရင်သင် feature ကိုမရကြဘူးသိသာကလပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ yeah ဒီတော့ဘုံလူများ၏ရန်လိုအထက်တန်းလွှာကထိန်းချုပ်ထားတိုင်းပြည်အတွင်းပုံမှန်သံသယရှိသူ, ပါဘူး။ သေစေလောက်သောလူ။ ဤအတောအတွင်းအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးရေးစပ်ပုံရသည်။
18 မှမတ်လ 2019 21: 56
ဒီလည်းရှိပါသည် .... ဒါကြောင့်အားလုံးတက်ရေတွက်။ ထိုအ AIVD'ers နှင့် MIVD'ers လုပ်နေတယ်အေဒီအစီရင်ခံထဲမှာသူကိုကြည့်ရှု
မဟာဗျူဟာ themes များ / အာရုံစိုက်ဒေသများ
Open Society များအတွက် Institution များ (မဟာဗျူဟာမြောက် themes များ)
TerInfo ။ အတန်းထဲတွင်ဆွေးနွေးမှုမှအကြမ်းဖက်ဝါဒ (2017-)
ယင်း၏ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်, ဥရောပလုံခြုံအောင်။ ဥရောပနှင့် (ERC Consolidated Grant က, 2014-2019) ကျော်လွန်နေတဲ့လုံခြုံရေးယဉ်ကျေးမှု၏ချမှတ်ခြင်း
မျှော်လင့်ခြင်း၏အပြာရောင် print (NWO အခမဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှု, 2016-2021)
နိုင်ငံတော်၏ရန်သူများ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြည်နယ်များ၏ဖြစ်စေလျက်, 1945-2000 (NWO VIDI, 2009-2014)
စမ်းသပ် (Nias သုတေသန, 2010-2011) အပေါ်အကြမ်းဖက်သမားတွေ
18 မှမတ်လ 2019 22: 29
20 နာရီ NOS သတင်း (00 :. 10 မိ) ပူ Zuijdewijn ၏ Jeanine ရွိုင်း: ဒါ့အပြင်စိတ်ဝင်စားဖို့ 06 ကနေ "အကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူက" ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် highbrow အမည်များကိုကြည့်ရှု ...
တိုက်ဆိုင်, Edwin က de ရွိုင်းဗန် Zuijdewijn ၏နှမ?
18 မှမတ်လ 2019 22: 38
18 မှမတ်လ 2019 22: 52
ဒါဟာစသည်တို့ကိုအများစုအဘို့အပျက်စီးခြင်း run သောသေးငယ်တဲ့အုပ်စု Minerva, Clingendael ဌာန (Cliteur မှတဆင့် baudet ဆက်သွယ်မှု) ဖြစ်ပါသည်
18 မှမတ်လ 2019 21: 46
အနာဂတ်သူလျှို, spooks နှင့်က trolls များအတွက်အမှန်စင်စစ်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ရေး။ ဘယ် Miller ကလည်းအပူအပင်ကင်းပြီးထံမှဒါမှကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ မှာဒါလူကောင်းတွေဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ စံပြသူလျှိုပစ္စည်း။ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားသူ့ကို Send, ဒါမှမဟုတ်
တစ်ဦးခရီးစဉ်အစီအစဉ်ကောင်းစွာ "ခရီးသွား" လို့ခေါ်ပါဘူး။
18 မှမတ်လ 2019 21: 33
18 မှမတ်လ 2019 21: 52
18 မှမတ်လ 2019 21: 18
"Facebook ပေါ်မှာလူတွေကသူတို့လုံခြုံဖြစ်ကြောင်း Utrecht အတွက်ပစ်ခတ်မှုအပြီးသတင်းပို့နိုင်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုတစ်ဦးလို့ခေါ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာဒီနယ်သာလန်အတွက်အဖြစ်အပျက်အဘို့အဖြစ်ပျက်သောနယ်သာလန်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါ Facebook ကဘေးအန္တရာယ်ဧရိယာ၌ဖြစ်နိုင်သည်သူမည်သူမဆိုဖို့အထူးသတင်းစကားကိုပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများကိုနှိပ်ပါ "ငါသည်ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်" ဟုအဆိုပါကို click နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်အလိုအလျောက်အသုံးပြုသူအပေါငျးတို့သမိတ်ဆွေများအကြောင်းကြား။
အဆိုပါ Facebook မှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုယခင်ကလန်ဒန်, မန်ချက်စတာ, ဘရပ်ဆဲလ်, ဘာလင်, ပဲရစ်, မြူးနစ်, Nice, တူရကီနဲ့ Las Vegas မှာပိုပြီးသွေးထွက်သံယိုမှုများနှင့်သစ်တောမီးလောင်ခြင်း, တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့်ငလျင်များကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ "
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်: အကြီးတွေဒေတာစနစ်များကိုယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ပြည်နယ်ကိုးစားလော့အမြန် Daddy ကိုသင်လုံခြုံပါတယ်ပြောပါတယ်မျိုး။ သင်တန်း၏, ဤအအချက်အလက်များ၏အားလုံးဘာမှအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ဆက်လက်။ ဒါဟာကိုယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။
ငါတဦးတည်းရဲ, စတာတွေစစ်တပ်အလိုတော်ကိုနားလည်မဝန်ခံရပါမည်။ သူတို့လွတ်လပ်စွာအာဏာကိုသန့်ရှင်းရေးစိတ်ကိုမရှိပါသလား? သူတို့တစ်ဦး madhouse ကစားနဲ့သူတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကယ့်ကိုကိုယ့်ရူးသွပ်ကြသည်ထင်ကြပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမကိုသူတို့ကယ့်ကိုပါဝါမရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာစတာတွေ, ရဲမှ militairtje ကစားသူတို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူမယူနီဖောင်းသွားသည်နှင့်မကိစ္စအရပျ၌သူတို့ကိုစောင့်သောအရာကိုစစ်အစိုးရကသူတို့ကိုစေသည်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုစစ်အစိုးရအဘို့အစိတ်မကောင်းပါဘူးမာတင်။
အရာရှိများသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုသင့်ရဲ့ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ပြောရလျှင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာတခြားသင်သည်ယူနီဖောင်းမပါဘဲဘာမှအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သင်တန်းမသငျ့သညျ။ Madurodam များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
18 မှမတ်လ 2019 21: 37
အနည်းဆုံးအခုသူတို့တစ်ဦးကိုမှန်ကန် 8 နှင့်9နိုဝင်ဘာလခဲ့ရသောလေ့ကျင့်ခန်း ... ဒါပေမယ့်မြေပဲယူအချိန်ရှိသည်
18 မှမတ်လ 2019 22: 10
ဒါ့အပြင် Vervoersmaatschappy Kreolis မှာယနေ့ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ရာလူသိများခဲ့သည်။ ဒါဟာ Kreopolis ဖြင့်မျောသွားပွတ်ထားပြီး
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မဓါတ်ပုံတွေကိုဤနေရာတွင် posted ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
မာတင် Vrijland ဖွငျ့တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာရရှိနိုင်
18 မှမတ်လ 2019 22: 13
@ ဆော်လမွန်ငါးအဆင်သင့်, နယ်သာလန်အချို့အယ်ဒီတာများအတွက်စာနယ်ဇင်းသမားများလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ညွှန်ကြားချက်အောက်၌တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ဟာရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပုဂ္ဂလိကအရေအတွက်ကိုရှိသည်နှင့်သင်တန်း၏ကလပ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်မှာလည်းအများအပြား '' နာမည်ကြီးစာရေးဆရာများသက်ဆိုင်သည်။ စာအရေးအသားဟာအဖုံးဖြစ်ပါသည်။ NARES, တစ်ဦးချင်းစီ stiekume ။
18 မှမတ်လ 2019 22: 57
လမ်းမများပေါ်တွင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမရဲ။ စတာတွေကိုသိုးစု, မလုံခြုံမှု,
@zonnetje ... ကျနော်တို့အားလုံးနီးပါးကစား။ ကျနော်တို့အသကျရှငျကအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်လော့။
18 မှမတ်လ 2019 23: 35
ah Nieuwsuur အနီရောင် Renault အတွက်မှတ်စုတစ်ခုရှိကိုတွေ့လိမ့်မယ်လို့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒီတော့ဒီအချိန်, ဒါပေမယ့်တစ်မှတ်ချက်မရှိပါ။
18 မှမတ်လ 2019 23: 45
Alas တအမ်းဒေသဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ scripted ဖြစ်ပါတယ် gosh ကငယ်ရွယ်နှငျ့အတူရှိ၏ ... သူတို့ကအသုံးဝင် Idiots ၏ပုံအပြည့်အဝ en ကိုရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲရှိရာ Idd wat..blijf အမြဲအံ့သြဖြစ်ပါတယ်တံခါးများဖွင့်လှစ်ရန်ပုံရသည် "ကံကောင်းထောက်မစွာတံခါးဖွင့်လှစ်" en အတွက်
18 မှမတ်လ 2019 23: 48
ထိုအခါအခြားသူ? "ဟုတ်တယ်, သူတို့ကပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ရှုပျော်မွေ့မှုတ်"
အဆိုပါ AIVD များ၏သရုပ်ဆောင်ကျောင်းတွင်အဖြစ်ရေခဲအေးဖြစ် Learn?
11: 25 မိနစ်သက်သေကို Nicky ဗန် Grinsven
18 မှမတ်လ 2019 23: 57
19 မှမတ်လ 2019 11: 38
19 မှမတ်လ 2019 10: 27
19 မှမတ်လ 2019 10: 47
Jaja emo buidling ယခုဇာတ်လမ်းကိုယုံကြည်အောင် Overdrive သို့ဝင်။ ဒါဟာမီဒီယာရဲ့, ဒီတော့မီဒီယာကိုရောက်စေနိုင်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ရုပ်ပုံများကိုပြသခြင်းနှင့်မြေတပြင်လုံးဇာတ်လမ်းဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းနည်းနိုင်ပါတယ်။
19 မှမတ်လ 2019 11: 03
ငါသည်သင့်ကို 1 မာတင်ကိုမေး
19 မှမတ်လ 2019 11: 18
တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး (Waikiki ကျွန်းများမှတလမ်းတည်းဖြင့်လက်မှတ်), ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အစစ်အမှန်လို့မရဘူးဖွစျနိုငျပါတယျ။ ကျနော်တို့ TV ပေါ်မှာကြည့်ရှုရအဆိုပါအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနှင့်မျက်မြင်သက်သေများ, ငါတို့ TV ပေါ်မှာကြည့်ရှုရ။ သို့မဟုတ်: မီဒီယာဇာတ်လမ်းအတွက်ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်နှင့်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းကိုလုပ်နဲ့ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ အဆိုပါလူမှုမီဒီယာစစ်တပ်ကကိစ္စတွင်ခုခံကာကွယ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
19 မှမတ်လ 2019 11: 43
ငါသော (စိတ်ပိုင်းတည်မငြိမ်) သံသယရှိသူနှင့်အတူထိုင်ပုံကိုအလွန်စပ်စုမိပါတယ်။ သူကကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်သေနတ်သမားဖြစ်ပါတယ် ?? သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့ကယခုအချိန်အထိကတယ် ?? သူသညျမိမိဦးခေါင်း၌အသံကိုကြား ?? ရုံအတွေး။ ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး၌တည်ရှိ၏အနည်းဆုံးဘယ်လောက်သူဟာသူတို့ဥပဒေပြုမှတဆင့်ထုတ်လှိမ့်ဖို့ရဲပြည်နယ်အဆုံးသတ်ဒီ "တိုက်ခိုက်မှု" လိုအပ်ညာဘက်လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
19 မှမတ်လ 2019 11: 36
19 မှမတ်လ 2019 12: 32
ဥပမာအားဖြင့်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကျူးလွန်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးကအဝေးရွှေ့ဖို့ခေတ်မီနည်းစနစ်ယခုရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့ကသူတို့တစ်ခုခုရှိသည်ဘယ်မှာတစ်ခုလုပ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုသေချာပါသည်။ ၏သင်တန်းကစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးယဇ်ပူဇော်ခြင်းအရန်လွယ်ကူသည်။
19 မှမတ်လ 2019 11: 42
19 မှမတ်လ 2019 11: 50
19 မှမတ်လ 2019 12: 15
အဲဒီမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်၏လုပ်ရပ်များ, ဖမ်းဆီးသံသယရှိသူ, သက်သေအထောက်အထားစတာတွေဟာတကယ်တော့တရားကိုဝယ်ယူခဲ့ရှိမရှိမထိခိုက်စေခြင်းငှါရှိမရှိမေးခွန်း။ တစ်ဦးက '' ကောင်းသော '' ရှေ့နေကယ့်ကို, ချောင်းဆိုးသိကြပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, လူဦးရေရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ။ ရွေးကောက်ပွဲများမနက်ဖြန်ရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ အများအပြားအတွေးအခေါ်မဲဆန္ဒရှင်ဖြစ်သို့မဟုတ်မယ့်လက်ျာဘက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကကျွန်မတွေးမိ?
19 မှမတ်လ 2019 12: 39
အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်ပုဂ္ဂလိကဥပဒ။ ဥပမာအားဖြင့်, လူသတ်မှုအများဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်သေဒဏ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အမှန်ပင်ရွေးနုတ်ဖိုးပျော်မွေ့ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်သို့မဟုတ်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်ဒဏ်၏သားကောင်များ၏ဆွေမျိုးများဆုံးဖြတ်ရန်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းလဒ်၏ပမာဏထို့နောက်ပါတီများအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှတဆင့်အကြောင်းကိုလာပါတယ်။ အသွေးသည်ရန်ငြိုးထားခြင်းသို့မဟုတ်ဂုဏ်အသရေသတ်ဖြတ်မှုတားမြစ်သည်။
19 မှမတ်လ 2019 13: 51
အဘယ်အရာကိုအထူးသဖြင့်ဘန်ဝစ်အပေါ်6နာရီလောက်မှာသတင်းမှမနေ့ကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တာကိုအာရုံစူးစိုက်မှု Utrecht အတွက်ဗလီမှပေးထားခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာပစ်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်သောအခါဤချက်ချင်းပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ဗလီ blah ၏မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေ။ သငျသညျအခွအေနေဘာကိုဆိုလိုဘူး။ နယူးဇီလန်အတွက်ပစ်ခတ်မှုနှင့်အတူပြန်သဘာဝကျကျ link တစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါလူများ၏စိတ်ကိုမှအရသာရှိတဲ့တုံ့ပြန်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမထပ်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်နေဆဲလူတွေ၏ဝိညာဉ်ကိုတုံ့ပြန်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ တခြားနေရာနေအိမ်၌နေရာယူပြီးတစ်ဦးသေနတ်ပစ်စရာရှိသောကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ယခုနောက်တဖန်တစ်ဦးဗလီပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ link ကိုမဆိုအသိမရည်ညွှန်းသည်။ နေမကောင်းဘယ်အရာကိုကမ္ဘာ။
« အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု 24 အောက်တိုဘာလရင်ပြင် Utrecht တစ်ဦးထိတ်လန့်သို့တစ်နိုင်ငံလုံး!
တိုက်ခိုက်မှု Utrecht ၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် PSYOP မရပါဘူးဧကန်အမှန်အသကျသပွေ? »